‘नेपाल मेरो घर हो, नेपालीहरु मेरो परिवार हुन्’ – गायक आदित्य नारायण झा….(भिडियो सहित) « Onlinetvnepal.com
‘नेपाल मेरो घर हो, नेपालीहरु मेरो परिवार हुन्’ – गायक आदित्य नारायण झा….(भिडियो सहित)
Published :7July, 2019 10:25 pm
गायक आदित्य नारायण झा शनिबार नेपाल आइपुगेका छन् । नेपाल आइपुगेका गायक झालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ । उनी ‘आदित्य नारायण झा लाइभ इन नेपाल’ का लागि नेपाल आएका हुन् । उनी गायक चर्चित गायक उदित नारायण झा र दीपा झाको छोरा हुन् ।
पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै धेरै समयको अन्तरालपछि नेपाल आएको गायक झाले बताए । उनले भने, ‘सात/आठ वर्षपछि नेपाल आएको हुँ । नेपाल आउन पाउँदा धेरै उत्साहित छु । हिजो सुट थियो, त्यसैले केही थकानको महसुस गरिरहेको छु ।’
उनले थपे, ‘नेपाल मेरो घर हो । नेपालीहरु मेरो परिवार हुन् । मेरो सबै नेपाली फ्यानहरुले धेरै माया । यसरी माया गरिरहनु ।’ गायक झा यसो भनिरहँदा उनले आफ्नो नेपाली फ्यानहरुका लागि ‘यो गाउँको ठिट्टो म, कान्छा मेरो नाम, आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम’ गीत पनि गुनगुनाएका थिए । आदित्यले काठमाडौंको ठमेलस्थित क्लब फरेनहाइटमा आज (शनिबार) प्रस्तुति दिदैछन् ।
जापानको टोक्योमा ‘सूर्य इन्टरनेशनल अवार्ड २०१८’ सम्पन्न गरिसकेपछि यतिबेला दोस्रो शृंखलाको घोषणा राजधानीमा भएको छ